WARBIXIN: Liiska Sii Kordhaya Ee Dhaawacyada Real Madrid, Waqtiga La Filayo In Mid Kastaa Kusoo Laabto, Nooca Dhaawaca Haleelay Iyo Vinicius Jr Oo Ku Biiray | Laacib.net
WARBIXIN: Liiska Sii Kordhaya Ee Dhaawacyada Real Madrid, Waqtiga La Filayo In Mid Kastaa Kusoo Laabto, Nooca Dhaawaca Haleelay Iyo Vinicius Jr Oo Ku Biiray
January 12, 2019 Abdiwahab A. Abeye 0
Tan iyo 31 December, 2018, Real Madrid waxa dhaawac kaga baxay shan ciyaartoy oo weli garoomada ka maqan, waxaanay ku biireen Marco Asensio oo hore sariirta u yeellay, kulankooda Axaddana waxa xaaladda kusii cakiri doona tababare Santiago Solari ganaax lagu riday Lucas Vazquez oo kaadh cas qaatay ciyaartii guul-darrada ee Real Sociedad, sidoo kalena waxa aan tababarkii Jimcihii qaadanin da’yarka reer Brazil ee Vinicius Juniors oo uu ku dhacay duray, waxaana loo badinayaa in aanu safan doonin ciyaarta Real Betis ee Axadda.
Dhaawacyada Real Madrid waxay noqdeen liis daba furan oo ay kusii kordhayaan xiddigaha waqtiga loo baahan yahay sariir yaalka noqonaya, waxaana kuwii ugu dambeeyey ee ku biiray ay ahaayeen Courtois, Kroos iyo Gareth Bale, waxaana kasii horreeyey Bale, Asensio, Llorente iyo Mariano Diaz.
Haddaba, waxa aanu halkan idiinku soo gudbinaynaa xaaladda laacib kasta oo ka mid ah lixdan ciyaartoy, qaabka uu yahay dhaawaca haleelay, kulamada uu maqnaanayo iyo xilliga la filayo inuu soo laabto.
Waa xiddiga ugu dhaawaca badan Real Madrid, waxaana kulankii Villarreal uu dib ugu laabtay dhaawac uu dhawaan kasoo doogay.
Xiddiga reer Wales ayaa waxa muruqa lugta bidix ka cawarmay qaybta hore ee ciyaartii ay barbarraha la galeen Villarreal, waxaana la beddelay xilligii nasashada, muddo laba usbuuc ah ayaana lagu qiyaasay inuu dibedda fadhiyayo.
Kulamada la hubo inuu maqnaanayo waxay yihiin laba, waana Real Betis oo Axadda ah iyo Leganes.
Dhaawac heerka labaad ah ayaa ka gaadhay muqura lugta midig kulankii semi-finalka tartanka Naadiyada ee lagu qabtay magaalada Abu Dhabi, waxaana uu seegay ciyaartii finalka iyadoo sidoo kale la tibaaxay in muddo saddex usbuuc ah uu garoomada ka maqnaanayo.
Waqtiga ugu soo horreeya ee la filayo inuu soo laabto waa dhamaadka bishan January, waxaana la hubaa inuu seegayo kulamada Real Betis, Leganes iyo Sevilla.
Dhaawacii ugu horreeyey ee muruqa ah intii uu joogay Real Madrid ayaa soo gaadhay kulankii guul-darrada ay kala kulmeen Real Sociedad, waxaana la filayaa inuu soo laabto dhamaadka bishan January.
Kulamada la hubo inuu maqnaanayo waxay yihiin Real Betis Leganes iyo Sevilla, sidoo kalena waxa la filayaa inuu maqnaado lugta koowaad ee tartanka copa del ee marxaladda siddeed dhamaadka haddii ay kooxdiisu u soo baxdo, taas oo ay la ciyaari doonto iyo weliba ciyaarta shanaad oo noqonaysa Espanyol.
Sannadka cusub ee 2019 waxa uu ugu bilaabmay dhaawac heerka labaad ah oo ka gaadhay muruqa lugta bidix, waxaanu qiyaastii garoomada ka maqnaanayay saddex usbuuc iyadoo haddaba la sheegay inuu diyaar garow ku jiro oo uu tababarka bilaabayo.
Labada kulan ee ugu soo horreeya ee Beits iyo Leganes ay kooxdiisu la ciyaarayso ayuu dibedda fadhiyi doonaa, laakiin lama hubo inuu taam u noqon doono kulanka xiga ee Sevilla.
Waa dhaawacii ugu dambeeyey ee Real Madrid lagu wargeliyo, waxaanu maqnaanayaa inta u dhaxaysa 10 illaa 14 maalmood, waxaanu dhaawaciisu ahaa muruqa oo heerka labaad ee dhaawaca ah.
Waxa uu seegi doonaa kulanka Real Betis ee Axadda iyo midka xiga ee Leganes oo marka horeba loosii qoondeeyey goolhaye Keylor Navas oo kulamada Copa del Rey ku qoran.
Dhaawac ayaa uu la kowsaday markii uu Real Madrid yimidba, waxaana markii uu soo laabtay haleelay mid kale xilli uu tababarka ku jiray, laakiin waxa uu hadda ku dhow yahay inuu soo laabto.
Kulanka la hubo inuu maqnaanayo waa Axadda ee Real Betis, waxaana la filayaa inuu fursad helo ciyaarta Leganes.